Thwebula Duolingo 3.34 – Vessoft
Duolingo – a software for a yokufunda ukhululekile of izilimi futhi ukukhuluma ukuthuthukiswa kwamakhono. Isofthiwe kwenza ukuba bafunde izilimi eziningi ezahlukene kubandakanya, isiNgisi, iSpanishi, French, German, isiPutukezi Italian and more. Duolingo kuhlanganisa ngezimo ezahlukene zokufunda okwenza ukuba bafunde ulimi ezingeni saqala futhi wandisa inqolobane yamagama noma ulwazi lolimi lwakho. Ukuthuthukiswa kwezilimi in the software wakhiwa ngendlela umdlalo elenza ukufunda ezithakazelisayo futhi ithele. Duolingo futhi ikuvumela ukuba ngokwezifiso inqubo yokufunda kanye nenani imisebenzi yansuku zonke.
Kufundvwa kwelulwimi ngendlela game
Ukusekela for izilimi popular
Izindlela ezahlukene zokufunda
Amazwana on Duolingo:
Duolingo Ahlobene software: